Issuu: Fitaovana iray amin'ny marketing, tsy magazine fotsiny | Martech Zone
Alarobia, Aprily 25, 2012 Alakamisy, Aprily 26, 2012 Janneane Blevins
Issuu dia matetika mifandray amin'ny indostrian'ny magazina fialofana an-tserasera, mitombo gazety lamaody, sy ireo vondrona liana hafa. Fa i Issuu, miaraka amin'ireo boky mitahiry PDF mora vidy, dia mety ho fitaovana fampiroboroboana ny varotra sy ny fandraharahana koa. amin'ny KA + A, rehefa manohy manitatra ny tobin'ny mpanjifantsika izahay, dia nanjary làlambe i Issuu hizara ny asanay amin'ireo olona manerana ny firenena.
Nanomboka tamin'ny boky portfolio izay novolavolainay sy natao pirinty tamin'ny tsanganana kely Teny notsongaina (fitaovana iray hafa lehibe). Tianay ny traikefa feno boky - ny lanjany eo am-pelatananao, ny pejy matte malama, ary ny fizahana amin'ny fotoana fialan-tsasatrao. Rehefa nanomboka nanao pirinty, nizara ary nanoratra ireo boky ireo izahay manerana ny firenena, dia fantatray fa mila fomba hafa hizarana ny atiny izahay. Voafetra ny paikadim-pirinty madio, na amin'ny vidiny, amin'ny fanamorana ny fanavaozana, na amin'ny fotoana fandefasana. Izahay dia nitady fomba hanaterana ny zavatra niainan'ny boky iray, rehefa notakiana.
Nahita ny vahaolana izahay tao amin'ny Issuu, sehatra famoahana nomerika nahafahanay nizara ny asanay tamin'ny mpihaino marobe ary mbola nanolotra traikefa nahafinaritra. I Issuu dia mitazona ny sasany amin'ireo toetra tena manintona amin'ny boky ara-batana (milentika sy azo zahana) ary mameno izany amin'ny tanjaky ny sehatra an-tserasera (mizara haingana, mora havaozina ary mora vidy) Ireo mpitsidika dia afaka manao ankolaka amin'ny alàlan'ny kinova feno an'ny ny bokintsika an-tserasera (jereo eto ambany!), ary zarao amin'ireo namany sy mpiara-miasa aminy ny pejy (na ny boky navoaka manontolo). Na dia ekenay aza, sarotra ny manolo ny fiantraikan'ny kopian'ny boky iray alina, ho an'ny ankamaroan'ny scenario, Issuu dia mahomby kokoa ary malalaka kokoa - ary izany no mitazona antsika hampiasa ilay fitaovana.
Sokafy ny famoahana - Maimaimpoana famoahana - Marika bebe kokoa
Tags: fampandrosoana ny orinasaContent MarketingHafanàm-po anissuu-barotraPublishing
Janneane dia Project & Community Manager miaraka amin'ny ekipa mahatalanjona ao KA + A, izay amolavolany marika sy traikefa ho an'ireo orinasa teknolojia mitombo avo lenta. Izy koa dia mpiara-manorina IndySpectator, torolàlana amin'ny e-newsletter ho an'ny fomba vaovao hitia an'i Indy, sy ny bilaoginy rahavaviny, Mpijery fanombohana, natokana ho an'ny sehatra fanombohana eo an-toerana. Vao tsy ela akory izay i Janneane dia niasa tamin'ny fampiroboroboana ny vondron'olona lamaody any Indy Pattern, fihaonana isam-bolana maimaimpoana ho an'ireo olona liana amin'ny lamaody.
Dia ny mailaka mankany amin'ny Inbox
Apr 26, 2012 amin'ny 12: 00 AM
Vao niresaka tamin'ny mpanjifa aho androany ary nizara ity lahatsoratra ity, Janneane. Izy ireo dia manonta brochure tena avo lenta amin'ny taonina amin'ny vokatra. Ity dia mety ho fomba mety indrindra hizarana ireo bokikely ireo amin'ny mpihaino azy. Misaotra an'ity lahatsoratra ity - teknolojia tena tsara ary tiako ny brochure KA + A… Manantena aho ny andro ahafahako miara-miasa amin'ny ekipanareo mba handaminana tsara ireo marika!